निर्वाचन : शिवगढमाथिको हमला
Visitor from US is reading निर्वाचन : शिवगढमाथिको हमला
Visitor from DE is reading who is the richest nepali
Visitor from US is reading wow whatahot nepali gal
Visitor is reading talking bout tonite
Visitor is reading IMAGINE! China Invades America!
Visitor from SG is reading Breaking news: मुस्ताङ घुम्न हिन्देका अचानक हेर्दा हेर्दाइ,
Visitor is reading Best Sanorita Pictures on Ramjham
Posted on 06-03-17 7:09 AM Reply [Subscribe]
लगभग ५ हजार वर्षअघि विश्व सभ्यता नै स्थापित गरिसकेको मुलुकबाटै त्यो सभ्यताको मूल नायकलाई मेटाउने उद्देश्यले आफू अनुकूलको संविधान स्थापना गर्नमा, पश्चिमले दक्षिणलाई उछिनेर पाएको अपार सफलता हो, यो निर्वाचन ।
- सौरभ, काठमाडौं
जेष्ठ २०, २०७४- प्रजातन्त्रको आधार नै निर्वाचन हो । त्यो हुनैपर्छ । तर अहिले भएको निर्वाचन नेपालको इतिहासमा अस्वाभाविक किसिमको छ । लगभग ५ हजार वर्षअघि विश्व सभ्यता नै स्थापित गरिसकेको मुलुकबाटै त्यो सभ्यताको मूल नायकलाई मेटाउने उद्देश्यले आफू अनुकूलको संविधान स्थापना गर्नमा, पश्चिमले दक्षिणलाई उछिनेर पाएको अपार सफलता हो, यो निर्वाचन । हाम्रोभन्दा उसको संस्कृति परिपक्व र विश्वमान्य हो भनी लाद्नमा उसलाई सफलता दिलाए बापत अनेक आयाममा अनेक पुरस्कार मिल्ला नै नेताहरूलाई ।
तर हो यो कसरी त्यो प्राचीन विश्व सभ्यताको मूल राजधानी ? भन्ने प्रश्नको उत्तर हो, यो लेख ।
बाँठपाल हुम्लाको सिमकोटवासीका निम्ति प्रमुख रक्षक देवता हुन् । वाक्य यस्तो छ– सिमकोटवासीलाई खान आएको अजिङ्गरलाई उनले त्रिशूलले तीन टुक्रा पारिदिए । यसरी त्रिशूलधारक भएपछि उनी महादेव भए, शिव भए ।
अर्को वाक्य छ– उनी मानसरोवरमा एउटा भोजमा ढिलो पुगे । यसरी शिवको निवास मानिने कैलाशको परिसरमा पुगेपछि उनी फेरि शिव नै भए । जनै पूर्णिमाको दिन बाँठपालको माण्डुमा ठूलो मेला लाग्छ । जसरी सोही दिन शिवको सयनस्थल मानिने गोसाइँकुण्डमा मेला लाग्छ । यसरी पनि उनी शिव नै भए ।
माघ शुक्ल द्वादसीका दिन पनि विशेष पूजा हुन्छ । यो काठमाडौंमा शिवकै नाममा मनाइने माघे जात्राको दिन हो । यसरी पनि उनी शिव नै भए ।
(पिथौरागढको मुख्य चोकमा स्थानीय दर्शनीय स्थलहरू औंल्याउने होर्डिङ बोर्ड टाँगिएको छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘वाणाशुरको किल्ला’ । आसामको शोणितपुरलाई वाणाशुरको राजधानी मान्ने भारतीय लेखकहरू पनि छन्, काठमाडौंको थानकोटको पुरानो नाम शोणितपुर भएकोले यसलाई वाणाशुरको राजधानी मान्ने हाम्रा अध्येयताहरू जस्तै । अर्थात् वाण र वाणा शब्द हाम्रो अति जिब्रोमैत्री भएकाले उनको नाम धेरै लेखकका निम्ति वाणपाल हो । सिमकोटलाई बिगारेर जिब्रोमैत्री सिमीकोटसम्म हुन्छ भने शिवको अवनति हुनु अनौठोचाहिँ भएन ।
अझ मेचीदेखि महाकालीका लेखकहरूका निम्ति कथित अछूतहरूका देवता हुन्, अरु कतिपयका निम्ति अलि तल्लो दर्जाका त हुन् नै, मष्टहरूका भानिज पर्ने तल्लै तहका अलौकिक तत्त्व हुन् । त्यति मात्र नभएर मानौं बाँडीचुँडी मनपराउने बाँडपाल हुन् ।
बाँठा तराईवासी थारूहरूमध्ये एक समुदायको थर हो । यीमध्ये केही पूर्वी तराईका मेचेहरूसँगै नजिकै बसोबास गरेका छन् पनि । आजभोलि यो थर बस्नु बोधक बैठा र बाठो बोधक बाठामा मात्र परिणत भइसकेको छैन, अंग्रेजी हिज्जेमा लेखेर नेपालीमा फर्काउँदा बइन्थसम्म भइसकेको छ । अब १०–१२ वर्षमा वैकुण्ठ हुन पनि बेर छैन । चितवनमा थारु युवाहरूले एक–अर्कोलाई बाठाबाठी भन्ने गरेबाटै पनि यसको अर्थ हराइसकेको स्पष्टै छ ।
तर आफूलाई उच्च मान्ने र अरुसँग हुक्कापानी नचलाउने पाँच थारू समुदायमा बाँठा पनि एक हो भनी भारतीयहरूले लेखिसक्दा पनि सीमावारिका बाँठाहरूले आफ्नो अवमूल्यन गरेको देखिन्छ । थाहै छ– नेपालमा झन्डै १८ लाख र पारिपट्टि लगभग डेढ लाखमात्र थारू बसोबास गर्छन् । अधिमूल्यन त यतै हुनुपर्ने हो ।
बोन मतको उपाशकबाट बाँतर थर भएकोमा, त्यसलाई बाँदरबाट बनेको हो, पोखरेल) र निच वर्गको मानिन्छ (शर्मा) भनेर लेख्नेसम्मको कसरत भइसकेकाले पनि हुनुपर्छ– बाँठामा परेको चन्द्रविन्दु असांस्कृतिक, अपरिष्कृत लाग्यो होला स्वयम् बाँठाहरूलाई ।
तर कानपट्टा, जोगी, भगत र महन्थ थर भएका थारू मूलमा गोरखनाथ सम्प्रदायका प्रख्यात सन्त रत्ननाथका जसरी उपाशक हुन्, त्यसरी नै बाँठाका मूल देवता शिव हुन् । त्यसरी उनीहरूको थर बाँठा भएको हो ।
बाठो मेचेहरूको शिव देवता हो । पाटे सिउँडीको हाँगा गाढेर बाठा देवताका नाममा उनीहरू पूजा गर्छन् भनी यसअघि पनि एउटा लेखोटमा लेखिसकिएको हो । यहाँनेर के ख्याल गर्नुपर्छ भने हुमलाबाट तेर्सो बाटो हुँदै झापासम्म आइपुग्दा बाँठ शब्दबाट चन्द्रविन्दु हराइसकेको छ ।
अब अर्थ खोलौं— संस्कृत शब्द त्रिशूलको ठेट नेपाली पर्यायवाची बज्रठिंगा हो । बज्रठिंगा शब्दलाई एकैपटक नेपाली वाङ्मयमा कसैले सटिक ढंगले प्रयोग गरेको छ भने सम्भवत: त्यो बोधविक्रम अधिकारीले हो, उनको कृतिमा । र बज्रठिंगा शब्द आफैं पनि बज्राँठको रूपान्तरण हो । प्रज्ञाको शब्दकोशले भनेजस्तो बज्रजस्तै अचल भई ठिङ्ग उभिने पात्र होइन ।
अग्राठ, नग्राठ, डाँठजस्तै ठोस बोधक हो—बज्राँठ जुन पाटे सिउँडी विशेषलाई भनिन्छ र त्यसको प्रतिकृति हो, त्रिशूल । पालको एउटा अर्थ धारण गर्नु पनि हो । यही बज्राँठपालको रूपान्तरण हो— बाँठपाल । यसकै रूपान्तरण हुन्— बाँठा र बाठो ।
यसरी नै प्रज्ञाको शब्दकोशले भनेजस्तो गोरखनाथी कानफट्टाहरूले फेरी लगाउँदा बजाउने बाजा बराँठ अरेविक शब्द बर्राकबाट बनेको होइन । बरु बज्राँठको रूपान्तरण हो । बराँठ शब्दकोशले भनेजस्तो शम्भर पनि होइन, भारतको आन्ध्र प्रदेशमा सुरुवाका रूपमा पस्किइने पदार्थजस्तो । भारतीयहरूले भन्ने साम्भर मृग भन्न खोजिएको हो भने त्यो विज्ञानको ‘रसा युनिकलर’ पनि होइन । जसलाई हामी सावर मृग भन्छौं, शावकबाट बनेको हो । बरु कृष्णसार अर्थात् विज्ञानको ‘एन्टिलप क्याप्रा’ हो, जसको सिङलाई मात्र भनिन्छ बराँठ । व्युत्पत्तिका मामलामा प्रज्ञाकोश एउटा ठूलो चुट्किला हो ।
अब बाठोले नेपालको सरहद कसरी पार गर्‍यो, हेर्दै जाऊँ ।
बावाङ वियान भन्छन्, चिनियाँहरू बज्राँठलाई । निरंकुश राजा (शिव) को कोर्रा (आयुध/हतियार) भन्ने अर्थ हुन्छ, यसको । स्पष्टै छ, शिव चीन लागे ।
हिमालय पारिको ‘ब’ वारि आएपछि ‘प’ हुन्छ । यसैले उता शिशावाङमा भन्छन्, यता शिशापाङमा हिमाल हुन्छ । उता जुन ठाउँलाई बुराङ भनिन्छ, यता पुराङ भनिन्छ । उताको बोन्वो धर्मबाट यता पुन, पुनेल थर बन्छन् । त्यसैले चिनियाँ बावाङ यता आएर गुरुङ, राई, मगर, लिम्बु, तामाङ परम्परामा सयौं–सयौंपल्ट नाम र अव्यय भएर आउने पाङ शब्द बन्छ ।
बठाला फिलिपिन्सवासीका निम्ति शिव देवता हुन् । त्यहाँ पुग्दासम्ममा ला थपिइसकेको कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।
फिलिपिन्सका मिन्डानाओ लगायत अनेक टापुहरू जहाँ अहिले कथित हिन्दु धर्म तमिलहरूले मलय– इन्डोनेसियन जलमार्गबाट लगेका हुन् भन्ने भारतीय दाबी छ । तर यस्तो बुझिन्छ, सीमा नघाएर नेपालीले उहिल्यै त्यहाँ पुर्‍याइसकेका थिए । पृथ्वीमा अज्ञात युगमा मानिसको बसाइँ–सराइ भइरहेको कुरा सर्वज्ञात तथ्य हो । मेगेलान र भाष्को द गामाका प्रथम पहुँचका कुरा नवीन नाटकहरू मात्र हुन्, पश्चिमको ।
बिट्ठल दक्षिण–पश्चिम भारतमा अहिले विष्णुका रूपमा पुजिन्छन् । तर विष्णु नभएर शिव पो हुन् कि ? भन्ने बलियोभन्दा बलियो आत्मभ्रम पनि त्यहाँ उत्तिकै व्यापक छ ।
त्यस्तो किनभने प्रशस्त विज्ञहरूले उनलाई एक ‘वीर प्रस्तर’का रूपमा पुजिन्थ्यो, त्यसैले शिव हुन् भनेको कुरा गुगलले जनाएको छ । जैन विद्वान हेमचन्द्रले रुद्र शिव हुन् भनेका कुरा पनि थाहा पाइन्छ । सेतो बोधक पाण्डुरङ्गसमेत भन्ने गरिए पनि उनको मूर्ति कालै हुने गरेको पनि थाहा पाइन्छ । स्थानीय धौरहरूले शिवकै रूपमा पुज्ने गरेको पनि बुझिन्छ ।
तर बिट्ठलको अर्थ इँटामाथि उभिएका पात्र भनेर अर्थ लगाउने कथित पूर्वीय संस्कृति विज्ञ विलियम ‘क्रुक’हरू त्यहाँ पनि छन् । यो जैन देवता हो भन्ने बुज्रुक स्टेभेन्सन पनि छन् । पश्चिमाहरूलाई पूर्वका बारे यति बुज्रुक किन हुनुपर्छ ? उनीहरूको कुरा भयो । पण्डरपुरको बिट्ठल मन्दिर तेह्रौं शताब्दीको हो ।
अब स्पष्टै छ, मलय जलडमरुबाट यात्रा गर्ने, मलय–इन्डोनेसियाई सामुद्रिक मार्गबाट गुज्रने दक्षिण भारतीय व्यापारीहरू विशेषगरी तमिलहरूले बठालालाई भारत पुर्‍याए ।
बेठेल फोनेसियनहरूका संहारक देव हुन् । फोनेसिया भन्नाले सुरुमा अहिलेको लेबनान, इजरायल, गाजा भाग, सिरिया र दक्षिण–पश्चिम टर्की हुन् । त्यसपछि सिरिया, अल्जेरिया, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रान्स, ग्रीस, इटली, जोर्डन, लिबिया, माल्टा, मोरक्को, प्यालेस्टाइन, ट्युनिसिया, पोर्चुगल र स्पेन थपिए । अर्थात् पुरै भू–मध्यसागरीय किनारका देशहरू यस सभ्यताभित्र आए ।
बेठेल भन्ने ठाउँ इजरायलको पश्चिम किनारा (वेस्ट व्याङ्क) को अहिलेको ‘वेट इल’ भन्ने ठाउँ हो । तर जेरुसेलम दक्षिणको बेठेलहम क्राइष्टको जन्मस्थान हो । पश्चिमाहरूले बेथेल भन्ने गरे पनि बेठेल बाइबलमा अनेक ठाउँमा आउँछ । जुन २ हजार वर्ष अघिको कुरा भयो ।
फोनेसियाको इतिहास ईसापूर्व १२ सय वर्ष अघिबाट सुरु भएर ईसापूर्व ५३९ मा साइरस प्रथमका हातबाट टुंगिन्छ । अर्थात् करिब साढे ३ हजार वर्ष पुरानो कुरा भइसक्यो बेठेलको अस्तित्वको । बिट्ठलभन्दा पनि झन्डै २ हजार वर्ष पुरानो ।
अहिले बार्ठोलोनियो भन्ने पश्चिमा थर हिब्रु भाषाको वार–टोलमेईबाट आएको भनिए पनि त्यो इजरायलबाटै उठान भएकोले सही लाग्दैन ।
बाल उगारिटहरूका देवता हुन् । उगारिट भन्ने ठाउँ अहिलेको उत्तरी सिरियाको राश– साम्रा भन्ने बन्दरगाह हो । बेठेलको अर्थ एल देवताको घर भन्ने व्याख्या छ । एल चाहिंँ बालका बाबु हुन्, कथाले । तर बालले बज्राँठ बोकेको मूर्ति नै उगारिटबाट उत्खनन गरिएको छ । जिज्ञासुले नेटमा तस्वीर हेर्न सक्नेछन् । उगारिटको उर्लंदो चहलपहल १८ सय ईसापूर्वको समय मानिएको छ । अझ त्यहाँको पाषाण युग ६ हजार ईसापूर्वको हो ।
यो फोनेसियन समय–सीमाबाट पनि धेरै परको हो । अहिलेको हिसाबले झन्डै ४ हजार वर्ष अघिको कुरा भयो । ग्रीसमा पुगेपछि बालको नाम बाल मारकोश हुन्छ । ४ हजार वर्ष अघिको कुरा दस्तावेजीकरण हुनलाई पनि अरु थप ३–४ हजार वर्षअघि नै त्यो सुरु भएको हुनुपर्छ । यसैले यो लेखको भूमिकामा लगभग ५ हजार वर्ष भनी लेखिएको हो ।
बिठाली इटलीको पुरानो नाम हो । यहाँ ब बदलिएर व भइसकेको छ र महाप्राण व्यञ्जन ठ, अल्पप्राण व्यञ्जन ट– मा झरेको मात्रै छ । एक पात्र इटालशबाट इटली भएको भनी अर्थ लगाउने डायोनिसस अफ हेलिकार्नासस ईसापूर्व पहिलो र एरिस्टोटल चौथो शताब्दीका हुन् । यसैले तिनको अर्थको यहाँ अर्थ भएन ।
जब बिठालिया थियो नाम, स्थानीय दक्षिणी जाति समूहहरूको पारिवारिक चिन्ह हुने गथ्र्यो, शिवको बहान साँढे । अब बाठो भूमध्यसागरको जिब्राल्टर नाघेर जान्छ ।
बेलाठु क्याडर्स उत्तरी बेलायतको यतिबेलाका कम्मरल्यान्ड र बेस्टमोर ल्यान्डका सेल्टहरूका देवता हुन् । आज बेलाठुलाई उतिबेला तल्लो दर्जाका मानिसले मान्ने गर्थे भन्ने गरिएको छ, ठ्याम्मै मेचीदेखि महाकालीका लेखकहरूका निम्ति बाँठपाल कथित अछूतहरूका देवता रहेजस्तै, जुन गलत हो नै ।
यसै बेलाठुबाट पर्सियनहरूले आजको ब्रिटेनको नाम बेलायत राखेका हुन् । जुनसुकै गोरालाई पनि बेलायती भन्ने गरेका हुन् । सेल्टहरूको बेलाठु उपासना गर्ने काल उनीहरूको आधुनिक फलाम युग अर्थात् ईसापूर्व २ हजारलाई मानिएको छ ।
म्याकवेथ शेक्सपियरको नाटकका एक अलोकप्रिय पात्र हुन् । यो थर आएको हो— स्कटल्यान्डको इस्ले र म्युलजस्ता टापुहरूबाट । अर्थ हो— बेठका छोरा । बेठोन थर पनि यही बेठबाट आउने हो । ब्रिटेन शब्द नै बेलाठुको ल लोप भएर आएको हो ।
भठेलको व्युत्पत्ति अहिले पश्चिमा संसारमा पाइँदैन । यो फ्रेन्च थर हो । खासगरी होटल, भोज–भोजन, सत्कार व्यवसायमा यो नाम प्रचलित छ । किनभने फ्रास्वाँ भठेल फ्रेन्च शासक लुई चौधौंको प्रसिद्ध भान्से हो, जसले कारणवश आत्महत्या गर्‍यो । त भठेल बेठलकै रूपान्तरण बुझिन्छ । बेलायतको म्याक नजोडिएको बेठ मात्र ।
डोनार जर्मन बज्रदेव हुन्, जो उत्तरी युरोपको शिव बोधक थुनोरबाट बनेको हो । यसैका समानान्तर हुन्, दित्रिख र बारबाठोस । बार्ठोलोभियोको बारको कथित हिब्रु व्युत्पत्तिमा विश्वास नगरिएको कारण नै यही बारबाठोसको बार हो ।
यसरी बाठोदेवको नाममा शिव मलक्का जलडमरु हुँदै, भूमध्यसागर हुँदै आल्पस नाघेर जर्मनीमा पुगेर उतिबेला उत्तर युरोपको युराल हुँदै युरोप पसेका आफ्नै पूर्व अवतार थुहरदेवसँग मिल्छन् ।
पुरानो संसार (युरेसिया, अफ्रिकाको उत्तरी भागसहित) का एकमात्र मान्ने देवता शिव नै हुन्, जसको सुरुवात भएको छ नै नेपालबाट भन्ने पहिला पनि लेखिसकियो । किनभने बज्राँठ (युफोर्बिया रोयालियाना) को मुख्य स्थान र परिकल्पना नै नेपालको महाभारत शृङखलाको हो ।
भाषाको नियति विचित्रको हुन्छ । कास्कीका मानिसका निम्ति बेलौती र अम्बा फरक कुरा हुन् । विज्ञानमा सिडियम ग्युजाभा भनिने यो फलको अर्थ उनीहरू निम्ति बेग्लाबेग्लै छ । बेलौती भनेको गोलो हो, अम्बा भनेको लाम्चो हो ।
भएको के हो भने अजरवैजानीमा जमरुदको अर्थ रातो हो । यसैबाट बहुमूल्य पत्थर इमराल्ड भन्ने बन्ने हो, हिन्दीमा बेलौतीको नाम अमरुद बन्ने हो । अमरुदबाट नेपालीमा अम्बा बन्ने हो । बेलजस्तो गोलो भएर होइन । पर्सियनहरूले गोरा बेलायतीहरू भनेको अर्थमा सेतो गुदीको बेलौती भएको हो, लाम्चो रातो गुदी भएकोलाई अम्बा भनिने हो । विचरा बाठोले बेलाठु हुनपुग्दा मध्य नेपालमै आज उसको परिचय हराएको छ ।
पञ्चायत जानैपथ्र्यो । तर २०४६ पछिका नेताहरू देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान कायम राख्न पूर्ण अयोग्य थिए भनेर अर्को राजनीतिक युगका विज्ञहरूले लेख्ने नै छन् । भइआएको सम्मन जोगाउन नसक्नेले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुरा हुटिट्याउँले आकाश थामिरहेको छु भनेजस्तै हो ।